नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो – Democracy Nepal
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो
प्रेम ताडी,चैत्र २० गते सुखड,कैलाली,
डेमोक्रेसी नेपाल संवाददाता
आज प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँ रहँदा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा सुधार सुधार भएको डाटा त बाहिर आयो ।तर म भने प्रेस स्वतन्त्रतामा सुधार भएको देख्दिन ।
सुधार भएको देख्दैन भनेर मैले पत्रकारलाई नराम्रो भन्न खोजेको चाहिँ पक्कै हैन । अहिले को जस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सबै मान्छेहरु घर भित्र बस्न बाध्य छन् तर पत्रकार भने आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर रिपोर्टिङ्ग को लागि फिल्डमा गएर समाचार संकलन गरिरहेका छन् । उहाँहरुलाई देख्दा मान्छेहरू टाढा बाट हेर्छन् । यो ब्यक्ति त संक्रमित भएको ठाउँ बाट आएको हो । भनेर तर बाध्यता छ । यो कोरोना महामारीको बेला आफूलाई सुरक्षित राख्दै अरूलाई सहि र साथ सूचना सम्प्रेषण गर्नु कत्तिको कठिन कार्य हो । अहिले पनि नेपालमा करिब ५ सय भन्दा बढी पत्रकार हरु संक्रमित भएर अस्पतालमा छन् ।
यस्तो अवस्थामा पत्रकारलाई पनि सहयोगको खाँचो त छ नै तर यहाँ अहिले धेरै जस्तो व्यक्ति पत्रकारको नाममा पित पत्रकारिता गर्ने गरेको उल्लेख्य मात्रामा देखिन्छ । न्युज लाई भ्युज को लागि लेख्ने गरेको देखिन्छ एउटा युटुब च्यानल खेलेर त्यसमा भ्युज गन्दै बस्ने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा एउटा कुशल पत्रकारलाई धक्का लाग्ने गरेको छ । नेपालमा पत्रकारिताको कुरा गर्दा राजनीतिको छत्र छायाँ मा परेको देखिन्छ । राजनीतिले सबै कुरा निर्धारण गर्छ । भर्खरै चैत्र २५ गते सम्पन्न पत्रकार महासंघ को निर्वाचनमा पनि पार्टीहरूको बर्जसो कायमै रह्यो । पार्टीबाट गएका पत्रकार मित्रहरुले महासंघको निर्वाचनमा विजयी हासिल गर्नु भयो ।
तर मैले सुनेको र पढेको पत्रकारिता त स्वतन्त्र हुनुपर्छ । पार्टीसँग यसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन । राज्यको चौथो अंग हो पत्रकारिता । अनि आवाज विहिनहरुको आह्वान हो पत्रकारिता भन्ने थियो र अझै पढ्दै छु । तर मैले पढेको पत्रकारिता विपरीत नेपालको पत्रकारिता अगाडि बढेको देख्छु ।
एक वर्ष पनि पत्रकारिता नगरेका आफूलाई स्वतन्त्र पत्रकार भन्ने हरु पार्टी बाट एउटा संगठनमा आबद्ध भएर निर्वाचनमा हुम्मिने बेला मैले विगत सात आठ वर्ष देखि यस क्षेत्रमा स्वतन्त्र पत्रकारिता गरेको छु भनेर निर्वाचनमा गए । जिते पनि अनि यस्तो अवस्था हेर्दा कसरी सूचकाङ्क मा कसरी सुधार भयो ? मेरो मन मा प्रश्न खेलिरहेको छ । के यसरी नै अगाडि बढ्छ नेपालको पत्रकारिता जगत ? यदि यस्तै अवस्था रह्यो भने के स्वतन्त्र पत्रकारिता विलय नहोला भन्न सकिन्छ त ?
यदि मैले यसो लेखी रहँदा कसैको मनमा नराम्रो लागेको होला स्वाभाविक रूपमा हो मैले यस्तो लेख्नु को कारण अब आउने पुस्ताले यस्तो किसिमको पत्रकारिता नसिकुन । राजनीतिबाट अलग रहेर पत्रकारिता गर्नु पर्छ भन्ने उहाँहरुको मनमा लागोस् ।
अनि यो लेखी रहँदा मैले पार्टीलाई पनि दोष दिन खोजेको हैन । मैले भन्न खोजेको कुरा यहाँ आवश्यक सबैको आ आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसलाई आफ्नै ठाउँमा छोडौँ एकलाई अरुसँग लागेर नजोडौँ भन्ने मात्र हो ।
मैले यो मेरो विचार मात्र लेखेको हुँ । म न त कुनै पत्रकार नै भएको छु न कुनै संगठनको सदस्य । म त पत्रकारितामा नयाँ आयाम थप्नु पर्छ भनेर पत्रकारितामा पाइला टेख्दै गरेको एउटा साधारण व्यक्ति मात्र हूँ । म न कुनै पार्टीको कार्यकर्ता नै हुँ ।
वास्तवमा कस्तो हुनुपर्थ्यो नेपालमा पत्रकारिता,भन्ने हो भने पत्रकारिता आवाज बिहिनहरूको आह्वान हो । त्यसकारण पार्टीको छत्र छायाँ बाट टाढा रहेर जनतालाई सहि र यथार्थ कुराहरू बताउनु पर्ने हुनुपर्ने थियो । तर अहिले यहाँ एउटा पार्टीको कुरा अर्को पत्रकारले लेख्छ अनि अर्को पार्टीको समाचार अर्को पत्रकारले लेख्छ । एउटाले एउटा पार्टी राम्रो भन्छ अर्को ले अर्को पार्टी राम्रो भन्छ अनि यसरी जनता सामु निष्पक्ष रूपले समाचार सम्प्रेषण होला त ? यो विषय अहिले को मुख्य सवाल बनेको छ । त्यसैले आजै बाट पार्टीगत स्वार्थ त्यागेर पत्रकारिताको धर्म अवलम्बन गरौं । निष्पक्ष पत्रकारिता गरौं । अनि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउन राज्यको चौथो अंग को महत्वपूर्ण हात रहने छ ।
जय देश, जय स्वतन्त्र पत्रकारिता।
Previous उपत्यकामा निषेध आज्ञा लाग्ने,१६ गते देखि सार्वजनिक यातायात पनि बन्द हुने
Next काँग्रेसको सामन्ती सोच र माओवादीको उग्रवादी चिन्तनमा रुपान्त्रण खोई ?
काँग्रेसको सामन्ती सोच र माओवादीको उग्रवादी चिन्तनमा रुपान्त्रण खोई ?
उपत्यकामा निषेध आज्ञा लाग्ने,१६ गते देखि सार्वजनिक यातायात पनि बन्द हुने
को हुन युवा?